မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: မဗေဒါနှင့် စကာင်္ပူရောက်အလွဲများ (၂)
Posted by mabaydar at 6:42 AM
ကိုယ်မသိသေးတဲ့ အရာ ဆိုတော့ အစပိုင်းတော့ အခက်အခဲတွေရှိတာပေါ့ဗျာ ၊၊ အားလုံး..ဒီလိုပါပဲ ၊၊ အခုတော့ မဗေဒါ ကျွမ်းကျင် အဆင့်ကိုရောက် နေ ပြီပဲ ၊၊ ဟုတ် တယ် ဟုတ် ၊၊
မဗေဒါကတော်တယ်နော်. Japanese student lifestyleကို Googleမှာ Typeတော့ ပေါ်လာချိန်မှာ မဗေဒါ ကျွန်ပျူတာကြီးကို ဖက်ထားတဲ့ပုံကို မျက်စိထဲမှာ မြင်ယောင်လာအောင် ရေးတတ်တယ်နော်.. ဟီးဟီး
ဟားဟား .. မဗေဒါ တို့ ကတော့ဖြစ်ရမယ် … မျက်လုံးထဲမှာမော်နီတာကြီးဖက်ထားတဲ့ပုံကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကိုပေါ်လာတယ် . . ။ ဟီး ဟီး
အင်တာနက်ကြီး ကျကွဲသွားလို့ အိမ်ကို ပိုက်ပိုက်လှမ်းမတောင်းဘူးလားဗျ. ဟား ဟား နောက်တာနော်. ဒီလိုပါပဲ. ကျတော်တို့လဲ စသုံးတုန်းက ကြောင်တက်တက်နဲ့ ပေါ့.နောက်တောလည်း.. အဆင်ပြေသွားတာပါပဲ
9/22/2008 9:34 PM
kon ban wa. ogenki desu ka? =D
ဟုတ်ပဗျာ ကျွန်တော်လဲ ရန်ကုန်မှာနေတုန်းက တစ်ခါပေါ့ software တစ်ခုရဲ့ serial key လေးလိုချင်လို့ Keygen site တစ်ခုမှာ ရှာလိုက်တာ မဗေဒါလိုဘဲ တန်းစီပြီး တက်လာလို့ ဆိုင်မှာဆိုတော့ ခက်တယ်မဟုတ်လား မနဲကို လိုက်မှီအောင် ပိတ်ယူရတယ် .. တော်တော် ချွေးပြန်သွားတယ်ဗျ။
ဖြစ်ရလေ တယ်ရင်းရယ်...။ ကြွက်...ကြွက်...ကြွက်။ :P
9/23/2008 4:15 AM
ငါသာlabထဲမှာ ရှိလို့ကတော့ ဘာဖြစ်တာလဲ ဘာကူပေးရမလဲ ဆိုပြီး ဇွတ်လိုက်မေးမယ်...ဟီ....ဟိ
Ha Ha Ha Ha Ha Ha ........ Ha Ha Ha Ha ...... Sometimes I find that you are really cute.....
9/25/2008 10:22 PM
ရယ်သွားတယ် မဗေဒါရေ ကျွန်တော် တို့ မြန်မာ လူမျိုးတွေ သနားဖို့ကောင်းတယ် ဗျာ ကွန်ပြူတာ ဆိုတာ လက်နှိပ်စက်နဲ့ တီဗွီ ပေါင်းထားတာ လို့ ပဲ ထင်တဲ့လူတွေက အများကြီး ရှိနေကြသေးတယ် ဗျ အုပ်ချုပ်သူ တွေ အသုံးမကျခဲ့ ကြလို့ပေါ့ ဗျာ..။